Anga'aan 'UN' tokko Yamanitti beelli haamaan mudachuu danda'a jechuun akeekkachiisan - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Sararroonni meeshaalee gargaarsaa Yamanitti galchuuf tajaajilan hundi cufamanii jiru, kun kan garee finciltootaa Huutii'n qabamee jiru dha.
Gargaarsi nyaataa yoo itti fufuu baate Yaman beela hamaaf saaxilamuuf deemaa jirti jechuun anga'aan Mootummoota Gamtoomanii akeekachiisaniiru.
Barreessaa olaanaa jelatti itti gaafatamaa dhimmoota namoomaa kan ta'an Maark Lowkook, walta'iinsi Saa'udiin durfamu biyya waraanaan miidhamte kanatti gargaarsi akka seenuuf karra akka bantu himaniiru.
Wiixata darbe wal-ta'iinsi kun erga finciltoonni Huutii Yaman irraa Misaayela dhukaasanii booda sarara qilleensaa, bishaanii fi lafoo guutummaatti cufee jira.
Misaayilli baalestiikii dhukaafame dhiheenya magaalaa guddoo saawudiitti qolaafamee ture.
Sararoota sunneen cufuun kan barbaachise Iiraan meeshaalee waraanaa finciltootatti erguu akka dhaabduufi jechuun Saawudiin himteetti.
Iiraan gama isheetiin finciltoota 2015 irraa kaasee walta'iinsa kana falmataa jiraniif gargaarsa akka hin goone dubbatti.
Goodayyaa suuraa Lolli waliinii Yaman lammiilee biyyattii harka keessaa hin qabne dararaa hedduuf saaxilee jira
Lowkook kaleessa Mana maree Nageenyaa 'UN'f walga'ii cufaadhaan ibsa erga taasisanii booda akkasitti dubbatu;
''Yoo tarkaanfiiwwan sunneen ka'uu baatan, beelli Yaman keessatti akka mudatu mana maree'tti himeera, beelli kunis kan adduunyaan hanga yoonaatti agarte hunda kan caalufii miiliyoonota kan miidhu ta'a'' jechuun riipportarootatti himaniiru.
Jalqaba torbee kanaarratti 'UN' fi Fannoo'n Diimaa lammiilee Yaman gargaarsa lubbuu baraaruu irratti hirkatani jiran irratti ''balaan cimaa'' akka dhufuu danda'u akeekkachiisanii turani.
Qorichi koleeraa namoota 900,000 ol midhee jiru wal'aanuuf gargaaran akka hin seenneef dhorkamee jiraachuu Dhaabbanni Fannoo Diimaa himee jira.
Dhaabbanni Mootummoota Gamtoomanii, lammiileen Yaman miiliyoon 9 ol ta'an beela hamaaf saaxilamuuf qarqararra jiru jedha.
Image copyright ABDO HYDER
Goodayyaa suuraa Sararroonni bishaanii meshaalee lammiileen itti fayyadaman galchuuf oolaa turan guutummaatti cufamanii jiru
Biyyattiin durumaan wantoota lammiileen fedhan hunda biyyoota alaarraa galchaa kan turte yoo ta'u, amma garuu nyaannis ta'e boba'aan akkasumas qorichi kara itti seenu hin qabu.
Akka gabaasa 'UN'tti, walta'iinsi Saawudiin durfamu kun erga eegalee 2015 irraa kaaseelola tureen, namoonni kuma 9'tti dhiyaatan - hedduun isaanii siiviilota kan ta'an yoo du'an, kuma 50 kan ta'an ammoo haleellaa samiirraa fi lafoodhaan raawwatameen miidhamanii jiru.
Diinqa paayileetotaa 'Boeing' keessatti rakkoo maaltu uumame?